सर्वसाधारणलाइ नआत्तिन आग्रह गदै सान्त्वना दिदै हिंडे चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङ ! « Etajakhabar
सर्वसाधारणलाइ नआत्तिन आग्रह गदै सान्त्वना दिदै हिंडे चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङ !
प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १७:५२
बेइजिङ । चीनमा फैलेको कोरोना भाइरसको सं”क्रमण अबको दुई महिनामा पूूर्ण रुपमा समाप्त हुने चिनिया स्वास्थ्य निकायले बताएको छ ।
चीनका एक प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकारले आगामी अप्रिल महिनासम्म कोरोना भाइरस पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउनेमा आफुहरु आशावादी रहेको बताउनु भएको हो ।
यसैबीच, हिजो चीनमा कोरोना भाइरसबाट सं”क्रमित नयाँ बिरामीको संख्या गत जानवरी ३१ देखिकै सबैभन्दा कम भएको जनाइएको छ ।
कोरोना भाइरस सं”’क्रमणको केन्द्रबिन्दु मानिएको हुबे प्रान्तमा हिजो ९४ जनाको सं”’क्रमणका कारण निधन भएको थियो, भने करिब एक हजार नयाँ बिरामीमा सं”’क्रमण देखिएको थियो । उक्त भाइरसका कारण हालसम्म चीनमा ११ सय जनाको निधन भइसकेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङद्धारा कोरोना भाइरस उपचार केन्द्रहरुको निरीक्षण
चीनमा प्राणघातक कोरोना भाइरसको स ङ्क्रमणको आशङ्का गर्दै उपचार गराइरहेका स्थानहरुमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
उहाँको बेइजिङमा स्वास्थ्य विभागले कोरोना भा इरसको स ङ्क्रमणको उपचारमा लागि सञ्चालन गरिरहेका स्थानहरुको सोमबार निरीक्षण गर्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
उहाँले बेइजिङको चाओयाङ जिल्लाको अनहुली समुदायका नागरिकका लागि कोरोना भाइरसको उपचारका लागि बनाइएका रोग निवारण तथा उपचार केन्द्रहरुको पनि निरीक्षण गरी ती स्थानमा अपनाइएका उपचार पद्दतिको बारेमा पनि जानकारी लिनुभएको बताइएको छ । साथै चीनका जनता नयाँ रोगबाट त्रसित भएपछि रास्ट्रपति आफै हस्पिटल र सार्वजनिक ठाउँमा भेटेका सर्वसाधारणलाइ न आत्तिन आग्रह गदै सान्त्वना दिदै हिड्नु भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : कोरोना भाइरसबाट निधन हुनेको सङ्ख्या १ हजार ३०० नाघ्यो हुबेइमा मात्र एकै दिनमा २४२ जनाको निधन !
यो पनि पढ्नुहोस : चीनबाट आएका आगन्तुकलाई अस्ट्रेलिया प्रवेशमा प्रतिबन्ध
सिड्नी, कोरोना भा”इरसबाट नराम्रोसँग प्रभावित चीनको मुख्य भूभागबाट आउने यात्रुहरूलाई अस्ट्रेलिया प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्ध कम्तिमा अरु एक हप्ताका लागि बढाउने अस्ट्रेलिया सरकारले घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय चीनमा कोरोना भाइरसबाट निधन हुनेको संख्या तिब्र रुपमा बढेपछि अस्ट्रेलियाले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अस्ट्रेलियालीलाई कोरोना भा”’इरसको जोखिमबाट जोगाउन अरु केही हप्ता चीनको मुख्य भूभागबाट आउने आगन्तुकमाथि रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यो प्रतिबन्ध भाइरसको परिस्थितिमा विचार गरेर हप्तैपिच्छे निर्णय लिइने बताउनुभयो ।
यस निर्णयले अष्ट्रेलियाका पर्यटन व्यवसायीलाई ठूलो चोट पुगेको छ । चिनियाँ पर्यटकको हिस्सा घटेपछि व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । साथै नयाँ शैक्षिक वर्षका लागि अष्ट्रेलिया फर्कने आशा गरिरहेका हजारौं चिनियाँ विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् ।
नयाँ कोरोना भाइरसबाट चीनमा मृ त्यु हुने र स””ङ्क्रमित व्यक्तिको संख्या नाटकीय रुपमा बढेको छ । पछिल्लो विवरणमा चीनमा मात्र एक हजार ३५० भन्दा बढी व्यक्तिको निधन भइसकेको छ भने ५० हजारभन्दा बढीमा कोरोनाको स”’ङ्क्रमण देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोरिसनले भन्नुभयो, “हाम्रो पहिलो कर्तव्य हरेक अष्ट्रेलियालीलाई सुरक्षित राख्नु हो ।”
ग्लोबल आइएमई बैंकका एक कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
यहाँस्थित ग्लोबल आइएमई बैंकका एक कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बैंक सिल गरी कर्मचारीलाई क्वारेन्टिनमा
नेपालगञ्ज – जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले शनिबार राति १२ः०० बजेदेखि मङ्गलबार राति १२ः०० बजेसम्मका लागि
एजेन्सी – भारतीय अभिनेता सञ्जय दत्त सिकिस्त बिरामी परेपछि मुम्बईस्थित लिलावती अस्पतालको आइसीयूमा भर्ना भएका
२५ श्रावण २०७७, आईतवार १२:५०
२५ श्रावण २०७७, आईतवार ११:४७
२५ श्रावण २०७७, आईतवार १०:३७